Abakhiqizi Nabahlinzeki Bangaphandle be-Coaxial Cable Amplifier | China Outdoor Coaxial Ikhebula zesikhulisa Factory
I-Bidirectional Line Extender Amplifier ZJ-LE1G-36APP
Isingeniso I-ZJ-LE1G-36APP iyindlela eyodwa yokuthola inzuzo ephezulu ye-Bi-directional Line Extender elungele ukukhuliswa kwesiginali ku-HFC system coaxial trunk. Ukusebenza kwe-CTB / CSO kuvelele ngokulahleka kokubuyisa kwe-16 dB. imvamisa yesihlungi se-diplex kuyakhethwa. Kukhona nemisebenzi ye-AGC / MGC. Izici 1. Imodyuli yesikhulisi seGallium arsenide esetshenziselwa indlela eya phambili. Inzuzo ephezulu ye-36dB; 2. Kunikezwe i-plug-in yunithi yokulungiswa kwempendulo yemvamisa, ekwazi ukuhlawula kahle ...
Mini Mini zesikhulisa ZA-MB-1G-40APP
Izici 1. Isebenzisa amamojula we-Enhanced Gallium Arenide (E-GaAs) ku-Phambili Phambili. 2. Inzuzo Ephezulu. 3. Amazinga aphezulu okukhipha. 4. Ukulungisa ipulagi yempendulo yemvamisa, kunganxephezela ngempumelelo iphakethe eliphakanyisiwe elenziwa ukwenziwa buthaka kwentambo kagesi engeyona ulayini. 5.Izindlu zangaphandle ze-aluminium zisebenzisa ukucubungula okuthuthukile kwamazwe omhlaba kanye nobuciko obunamanzi obunamanzi amabili, iyunithi ayigcini nje ngokulwa nokulimaza nokulwa nokuguga, kepha futhi inemisebe emihle, futhi inenhle ...
Ulayini Isikhulisi ZA-LE1002-S
Izici 1. Imodyuli yesikhulisi seGallium arsenide esetshenziselwa indlela eya phambili. Inzuzo ephezulu ye-36dB; 2. Inikezwe i-plug-in yempendulo yokulungiswa kwempendulo yemvamisa, ekwazi ukunxephezela ngempumelelo isikebhe esiyi-convex esivela kukwehliswa kwekhebula okungenantambo; 3. Kusetshenziswa ukwelashwa okuhamba phambili okuhamba phambili kanye nenqubo yokungena ungqimba ephindwe kabili kuhlobo lwangaphandle lwe-aluminium die cast casing, emelana nokugqwala nokuguga, okuhle ekushiseni kokushisa, ukungangeneki kwamanzi ne-electromagneti ...
I-ZA-APP-1.2G yesikhulisi sangaphandle
Isingeniso ZA-APP-1.2G izindlela ezimbili zokuzuza okuphezulu kwe-Bi-directional Line Extender amplifier elungele ukukhuliswa kwesiginali ku-HFC system coaxial trunk. Ukusebenza kwe-CTB / CSO kuvelele ngokulahleka kokubuyisa kwe-16 dB. imvamisa yesihlungi se-diplex kuyakhethwa. Izici 1. Imodyuli yesikhulisi seGallium arsenide esetshenziselwa indlela eya phambili. Inzuzo ephezulu ye-38dB; 2. Inikezwe i-plug-in yempendulo yokulungiswa kwempendulo yemvamisa, ekwazi ukunxephezela ngempumelelo isikebhe esihlanganayo esivela kwikhebula elingelona ...
Isikhulisi se-Bidirectional ZA836R65-60V
Izici ● I-Gallium arsenide amplifier module esetshenziselwa indlela eya phambili. Ukuzuza okuphezulu kwe-36dB ● Kunikezwe i-plug-in yunithi yokulungiswa kwempendulo yemvamisa, ekwazi ukukhokhela ngempumelelo i-convex hull ebangelwe ukunqanyulwa kwekhebula okungenayo i-lineline. ● Kusetshenziswa ukwelashwa okuhamba phambili okuhamba phambili kanye nenqubo engangenwa manzi yesendlalelo esingaphandle kuhlobo lwangaphandle lwe-aluminium die cast casing, emelana nokugqwala nokuguga, okuhle ekushiseni kokushisa, ukungangeneki kwamanzi kanye ne-electr ...
I-Unidirectional Amplifier ZA836-220V